သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုကြောင့် လူ ၁၈ ဦး သေဆုံးကာ လူဦးရေ ၂၀၇,၀၀၀ ကျော် ရေဘေးသင့် - Xinhua News Agency
သီရီလင်္ကာနိုင်ငံ ကိုလံဘိုမြို့အစွန်အဖျားရှိ Kaduwelaat ဆင်ခြေဖုံးနေရာ၌ ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်ပေါ်နေသော လမ်းပေါ်၌ မော်တော်ယာဉ်တွန်းနေသူများအား ဇွန် ၈ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကိုလံဘို ၊ ဇွန် ၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
မကြာသေးမီရက်များက သီရိလင်္ကာနိုင်ငံအနှံ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း နှင့် လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းများ ကြောင့် လူ ၁၈ ဦး သေဆုံးကာ လူဦးရေ ၂၀၇,၀၀၀ ကျော် ဘေးဒဏ်သင့်ခဲ့ကြောင်း ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုစင်တာ(DMC)က ဇွန် ၈ ရက်က နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်မှုတွင် ဖော်ပြထားသည်။တရားဝင်စာရင်းဇယားများအရ နိုင်ငံအတွင်းရှိ ခရိုင် ၁၀ ခုသည် မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရပြီး နေရာအများအပြားတွင် တာဝန်ရှိသူများက ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေခြင်းနှင့်အတူ ရေလွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘေးအန္တရာယ်အမြင့်မားဆုံးနေရာများမှ ပြည်သူ ၂၃,၀၀၀ ဦးကျော်ကို ပိုမိုလုံခြုံသောနေရာများသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးထားပြီး ပျောက်ဆုံးနေသူတစ်ဦးအား ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်နေကြောင်း DMC က ပြောကြားခဲ့သည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသည် နှစ်စဉ် အနောက်တောင်မုတ်သုန်လေတိုက်ခိုက်မှုဒဏ်ကို ရင်ဆိုင်ရပြီး မိုးလေဝသဌာနက လာမည့်ရက်များအတွင်း မိုးရေချိန် ၁၅၀ မီလီမီတာအထိ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမည်ဟု သတိပေးထားသည်။ပြည်သူများအား အထူးသဖြင့် မိုးကြိုးအန္တရာယ် သတိထားရန် တိုက်တွန်းထားကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ၊ မြောက်ပိုင်းအလယ်ပိုင်း နှင့် အနောက်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်များတွင် လေတိုက်နှုန်းအရှိန်သည် တစ်နာရီလျှင် ၅၀ မှ ၅၅ ကီလိုမီတာအထိ မြင့်မားနိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း မိုးလေဝသဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံအတွင်းရှိ နေရာအများအပြားတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှုများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် ရေဖုံးလွှမ်းနေကြောင်း နှင့် အနိမ့်ပိုင်းနေရာများတွင် နေထိုင်ကြသော ပြည်သူများအား သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုစင်တာ(DMC)ထံမှ သိရသည်။
နိုင်ငံအတွင်းရှိ ခရိုင်တစ်ချို့တွင် မြေပြိုမှုအန္တရာယ် သတိပေးချက်ကိုလည်း ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
COLOMBO, June 8 (Xinhua) — Eighteen people were killed and over 207,000 others affected following days of heavy rains and strong winds which lashed out across Sri Lanka in the recent days, the Disaster Management Center (DMC) said in its latest update here Tuesday.
According to official statistics, 10 districts in the country have been severely affected by the rains while many areas remain inundated with officials carrying out rescue operations.
Over 23,000 people from the high risk areas have been evacuated to safer locations, whileasearch operation has been launched to locate one missing person, the DMC said.
Sri Lanka is facing its annual southwest monsoons, with the Meteorology Department warning of further rains of 150 mm in the coming days. The public has been urged to be cautious especially of heavy lightning.
The department also said wind speeds were expected to increase up to 50 to 55 km per hour in Northern, North Central and North-Western Provinces.
According to the Disaster Management Center, several areas in the country have already been inundated following the heavy rains andawarning has been issued to families living in the low-lying areas.
A landslide warning has also been issued for some districts of the country. Enditem
COLOMBO, June 8, 2021 (Xinhua) — People wade throughaflooded road in Kaduwelaat, the outskirts of Sri Lanka’s capital Colombo, on June 8, 2021. Eighteen people were killed and over 207,000 others affected following days of heavy rains and strong winds which lashed out across Sri Lanka in the recent days, the Disaster Management Center (DMC) said in its latest update here Tuesday. (Photo by Ajith Perera/Xinhua)